Accueil > Gazetin'ny nosy > Mahazengy-Fianarantsoa: Pastora loterana nanala baraka pôlisy
Mahazengy-Fianarantsoa: Pastora loterana nanala baraka pôlisy
Mba tsy rariny intsony hoy ireo mpiangona ao amin’ny fiangonana Loterana Vohimasina Mahazengy ao Fianarantsoa no nataon’ity pastora mitondra ity zana-piangonana ity. Izany Philbertin izany no anarana ahalalan’ny olona azy. Mpivavaka sendra niangona tao amin’ny fiangonana tao Mahazengy tamin’ny faha 25 desambra 2017 lasa teo no tsy nahatanty intsony ny fomba nataon’ity pastora ity ka nitady izay fomba hahazoany mampahafantatra ny olona ny zavatra tsy zakany tao amin’ilay fiangonana. Andron’ny krisimasy moa ny andro tamin’io ka tena nahagaga tanteraka no antony nanaovany izany.
Voalazan’ilay loharanom-baovao fa fanaratsiana ny pôlisy Malagasy no nataon’ity pastora ity tamin’ny toriteniny. Nambarany tamin’izany fa raha toa hoy izy ka tsy manam-bola ny ao an-tokatranon’ny pôlisy dia lasa izy mandray kiririoka dia manakana fiarakodia. Rehefa miverina izy dia mitondra saosy iray na roa kilao. Raha mitaraina fa tsy manam-bola koa ireto zanany dia tsy miteny hono ny pôlisy fa ny kiririoka hatrany no raisiny dia manakana fiara izy ka manome vola ity zanany rehefa miverina. Asa na tsy fitiavana pôlisy na tsy fahaizana mitory ny fivavahana no anton’izany fa nandratra olona maro ny fihainoana azy. Ny pôlisy amin’ny ankapobeny no noraisiny ary tsy nilaza izy hoe ireo pôlisy tsy manara-dalàna na ireo pôlisy manaonao foana. Ny loharanom-baovao dia somary tafintohina ihany satria misy dia misy tokoa ny pôlisy izay manao ny asany soa aman-tsara ka nahoana no lotoana avokoa rehetra? Tsy izay ihany fa misy pôlisy koa tonga nivavaka ao amin’ity fiangonana ity isak’alahady.
Dia izany ve no fomba hoentin’ny pastora FLM mananatra sy manentana ny mpino ao aminy ankehitriny? Raha ny loharanom-baovao azonay koa dia nisy tezitra ny zanaka ny pôlisy naheno ity toritenin’ny pastora Philibertin ity ka tonga mihitsy nihantsy azy andro vitsy taorian’io. Ny tena nahagaga ny olona koa dia ny fanaovany izany teo imason’ny lehiben’ny fileovana izay namangy tamin’ity zana-piangonana ity tamin’io andro io.
Ankoatr’izany dia sahy nandroaka mpiangona tao ampiangonana ity pastera ity ka lehilahy iray izay efa ho 80 taona mahery no azon’izany tamin’ny faha 17 desambra 2017. Voalaza nefa fa isan’ireo loholona ao am-piangonana ity rangahy ity, ary isan’ny olona izay nikely aina tamin’ny fananganana ity fiangonana ity ny taona 1995. Tsy izany ihany fa mbola nisy vehivavy iray izay niady hevitra tamin’ilay pastora koa ka tsy nitovy hevitra taminy dia tsy navelany handray ny fanasan’i Tompo koa. Nodinganiny ity ramatoa ity rehefa tonga teny amin’ny alitara raha nandohalika handray ny fanasan’i Tompo iny. Maro no resaka voalaza fa ny karama no olana amin’ilay pastora ka mampanao azy toa izao. Mbola misy koa raharaha tanin’ny fiangonana izay tadiaviny halaina miaraka amin’ny mpitondra fiangonana lehibeny koa ka tsy manaiky izany ireto mpiangona ireto. Izay mifanohitra aminy dia saziany na roahiny tao ampiangonana izao.
Tsy amin’ny fanaovana pôlitika ihany ankehitriny no misy olana amin’ny fanararaotam-pahefana fa hatrany ampiangonana koa. Midika izao fa mikorontana tanteraka ny fiaraha-monina Malagasy. Ny tena olana dia ny fahasahian’ity pastora ity miampanga ny pôlisy tsy ankanavaka. Asa na azony ny fiantraikan’izany amin’ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny? Tsy ny hadisoan’ny olona iray na roa na telo no hanasokajiana ny daholobe ho adala. Tena izany ve no fomba fitoriana teny any ampiangonana ankehitriny?
Politika: Nifanantona ny depiote 79 sy 73
Ratsirahonana Norbert: Nampitondra faisana ny firenena Malagasy
Firaisamonim-pirenena Rohy: Ady seza no manjaka
Politika: Namidin’i Rajoelina sy Rajao i Madagasikara
Oniversiten’Antananarivo: Hanao “sit-in” ny mpampianatra sy mpandraharaha ary mpianatra
Fianta: Miavaka ny firaisankinan’ny Antemoro